Jun 20, 2022 Hope
ရင်သွေးငယ်ကို ဆုံးရှုံးစေတဲ့ နေရာမှားသန္ဓေတည်ခြင်း ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းပေါင်းစည်းမှုလေးဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး နေရာမှား သန္ဓေတည်တဲ့အဖြစ်မျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Ectopic Pregnancy (သားအိမ်ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း) အကြောင်းကို သေချာသိချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်
မိခင်လောင်းတိုင်းအရမ်းစိုးရိမ်ကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့မွေးရာပါရောဂါ ရင်သွေးငယ်လေးတွေဆိုတာ မိမိသွေးသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစုတစ်ခုရဲ့အနာဂတ်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့ရင်သွေးငယ်တွေမှာ မွေးကတည်းက မွေးရာပါရောဂါတွေကြောင့် ရောဂါတစ်ခုခုပါလာတာ၊ ခြေလက်အင်္ဂါမစုံလင်တာကစလို့ အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိပါဖြစ်နိုင်တာကြောင့် လုံး၀မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ရောဂါတွေထဲပါပါတယ်။ ဒါဆိုရင်
ကလေးငယ်တွေ အစာစားချင်စိတ် တိုးလာအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲ ???
May 24, 2022 Hope
ကလေးငယ်တွေ အစာစားချင်စိတ် တိုးလာအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်လဲ ??? __________________________________________________________________ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈ မှ ည
Child Health Health Tips Pregnancy and Women Health
မေမေတို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်း ကလေးဆုံပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ
မေမေတို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်း ကလေးဆုံပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ “Breech presentation”မေမေတို့ ရင်သွေးလေးတွေလွယ်ကြလို့ Ultrasound ရိုက်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေ ကလေးကဆုံပိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောတာကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီတော့ ကလေးဆုံပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလည်း? စိုးရိမ်ဖို့လိုလား?